CIA VS. CPA - Waa kuwee Certification waa Better? [It's a Close Call]
CIA vs CPA: Waa kuwee Certification kuu wanaagsan inaad?
23 Aug CIA vs CPA: Waa kuwee Certification kuu wanaagsan inaad?
Waa su'aal adag si ay uga jawaabaan: aad noqoto waa in a Shahaado Hantidhawrka Gudaha (CIA) ama shahaado Xisaabiyaha Guud (CPA)? Labada la ixtiraamo aqoonsiga xirfad in aad u hagaajisid xirfadaha iyo horusocodka xirfadaada, laakiin sidee ayaad u dooran? Bal aan ka bilowno by hoos u jabiyay waxa aqoonsiga kasta oo u baahan doonaa in la eego waqtiga, dadaal, iyo kharashka.
Waa maxay CIA a?
CIA vs CPA: Shuruudaha Certification
CIA vs CPA: Imtixaanka
CIA vs CPA: mushaaraadka
Shahaado xisaabaadka Dadweynaha ayaa la filayaa inay qabtaan shaqooyinka ay anshax. maxaad? Maxaa yeelay, iyagu ka mas'uul ah fulinta shaqooyin la xiriira xisaabaadka Dawladda iyo guud warbixinta maaliyadeed waa, sida diyaarinta bayaanka maaliyadeed, canshuurta diyaarinta, iyo record hayo-kasta ah oo waafaqsan xeerka set oo ah heerarka a. CPAs yihiin dadka kaliya ee si sharci ah loo ogol yahay inuu la soo wareego soona gudbiso caddaymaha dhaqaalaha si IRS. Si aad u noqoto CPA ah waa inaad ku gudubto imtixaanka caan CPA in maamusha AICPA ah. Waxay ka kooban tahay 4 qaybo ka mid: Accounting iyo Baarista, Degaanka Ganacsiga iyo Fikradaha, Financial Accounting Warbixinta, and Regulation.
Si aad u noqoto CPA ah waa inaad ku gudubto imtixaanka caan CPA in maamusha AICPA ah
Shahaado hantidhawrka gudaha ida ay diiradda saaraan fulinta hantidhawrka gudaha ah dhaqaalaha shirkadda iyo ilaaliyaal gudaha. CIAs kaloo samayn kartaa hanti-nidaamyada macluumaad, waafaqsanaanta iyo hab kale oo muhiim ah gudaha. Tani waa doorka u baahan in aad had iyo jeer iyo hogaansamaan anshax heer sare. Sida CPA ah, si ay u noqdaan CIA ah waa inay ku aflaxaan imtixaan. imtixaanka CIA waxaa maamula ee Institute of hantidhawrka Gudaha (IIA) wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybo ka mid: Aqoonta Business for Baarista Gudaha, Practice ee Baarista Gudaha, iyo Essentials ee Baarista Gudaha. Waxa aad war dheeraad ah oo ku saabsan baran kartaa ugu wanaagsan ee koorsooyinka udiyaarin CIA halkan.
Si aad u noqoto CIA a, waa in aad la kulanto shuruudaha soo socda:
Kasbadeen degree afar sano dugsiga sare kadib ee uu ka qaatay Jaamacad la aqoonsan yahay. (Tan waxaa loo bedelay karaan waayo-aragnimo shaqo; sidoo kale shan sano oo khibrad shaqo oo ay weheliyaan laba sano oo dugsi sare kadib, ama toddoba sano oo shaqo ah hanti dhowrka xaqiijin.)
Laba sano oo waayo-aragnimo xaqiijin hubinta shaqada (shahaadada Masterka ee badali karaa muddo hal sano ah)
Gudub 3-qayb ka mid ah Imtixaanka CIA
Bixi dhammaan lacagaha codsiga iyo imtixaanka lagu dabaqi karo
Soo gudbi Foomka Tixraaca Character uu ku saxeexan yahay CIA a, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, ama horjoogaha shaqada
Ku heshiiyaan in ay u hogaansamaan ah IIA ee Code of Ethics
Bixi caddaynta aqoonsiga
Waqtiga loo baahan yahay si ay u noqdaan CIA buu u kala duwan, oo ku salaysan fursado badan u yeesho waxbarashada / shuruudaha aragnimo shaqo. Waxaad u baahan doontaa 4 sano ee kulliyadda si ay u helaan shahaadada undergraduate aad. Markaas waxaad u baahan doontaa 2 sano oo waayo aragnimo shaqo ansixiyay, kaas oo keenaya tirada guud ka dhigaysa 6 sano. IIA ogolaanaya 4 sano noqotay imtixaanka (kaas oo sidoo kale waxay leedahay heerka pass aad u yar), sidaa daraadeed waxa aad qaadan karto 10 sano si ay u noqdaan certified. Si aad u Noqo CPA ah, waa in aad la kulanto shuruudaha soo socda:
Buuxiyaan shuruudaha waxbarashada iyo waayo-aragnimo laga xoreeyo dalka ah. gobolka oo aad la doonayo in la shati. Kuwani waa kala duwan gobol ka gobol, laakiin guud ahaan shuruudaha ku idin waydiin inay haystaan ​​ugu yaraan shahaadada afarta sanno ah ee xisaabaadka, ganacsi ama qayb la xidhiidha IYO laba sano oo shaqo ah xisaabaadka guud
Gudub Exam afar qaybta CPA ah
Anigu si adag ayaan kugu dhiirinaynaa in aad si dhow u baaraan shuruudaha aad gobolka ka hor taag safarkaaga CPA. CIAs duwan, kuwaas oo qaran shahaado, CPAs waa inay helaan liisan ee gobol kastaa, taas oo ay ku dhaqmaan. Waxaad ku dhawaad ​​joogi doonaan 5 sano in aad bachelor iyo / ama shahaadada Masterka ee u gudan 150 credit saac looga baahan yahay si ay u noqdaan CPA ah. Haddii aad u baahan tahay dawlad-aragnimo shaqo, ka dibna ku dar kale 2 sano. AICPA wuxuu kuu ogol yahay 18 bilood in ay gudbaan imtixaanka CPA ah. Taasi oo dhan kor ku darayaa in 8 ½ sano.
Imtixaanka CIA waa 100% xisaabinta ku saleysan oo ka kooban saddex qaybood oo kala duwan:
Part 1: Aasaaska Audit Gudaha
Part 2: Practice Audit Gudaha
Part 3: Qaybaha Aqoonta Audit Gudaha
Waxaad qaadan kartaa imtixaanka CIA wakhti kasta sanadka oo dhan at mid ka mid ah 500+ Pearson VUE Xarumaha adduunka oo dhan. Imtixaanka waxaa la siiyaa in 16 luqadood, lugu daro Carabi, Chinese (dhaqanka), English, Faransiis, Jarmal, Hebrew, Indonesian, Talyaani, Japan, Kuuriyaan, Polish, Portuguese, Ruush, Isbaanish, Turkish, iyo Thai. Haddii aad tahay xubin ka mid ah IIA, kharashka ku imtixaama iskaga daafaco waa $990. Non-xubnood inay bixiyaan qiima buuxa ee $1,150, taas oo ah sababta u qalantaa waa waqti aad xubin IIA ah noqday. Imtixaanka CPA ayaa wuxuu ka kooban yahay afar qaybood:
Audit oo Ogeysiin (AUD)
Financial Accounting iyo ka warbixinta (FAR)
Degaanka Ganacsiga iyo Fikradaha (BEC)
Like Exam CIA, Imtixaanka CPA yahay 100% computer ku salaysan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la maamulo kaliya via Prometric Xarumaha Imtixaanka inta lagu jiro afarta daaqadaha labo bilood sanadka oo dhan. Baaritaanka looma bixiyo March, June, September ama December. Qiimaha Exam CPA ee kala duwan ee gobolku / awood, laakiin guud ahaan u dhaxeysa $600 si ay u $800 waayo, afarta qaybood.
Guud ahaan, CPAs kasban wax yar ka badan CIAs, laakiin waxaas oo dhan waxay ku xiran tahay CIA ee horyaalka shaqo. Qodobada kale ee go'aan ka gaari kara mushahar CIA ama CPAs a, sida goobta, horyaalka, oo sano oo waayo aragnimo go'aamin doona mushaharkaaga. Mushaharka dhexdhexaadka for CPA ah waa $62,123 iyo $59,677 CIA. Dhawaan ayaa dalabka ah la adkeeyo la xisaabtanka adkeeyay iyo hawlihiisa oo kordhay., koritaanka mustaqbalkiisa qaadashada rajo for CIAs iyo CPAs labada.
Dabcan, Waxaas oo dhan waxay ku xiran tahay waxa aad doonayso in aad qabato. shahaado CIA waa ay fududahay in la helo ka badan CPA tan iyo imtixaanka waxaa diiradda lagu saaray 1 Qaybta ugu weyn ee xisaabaadka, halka imtixaanka CPA waxay ku salaysan tahay 4. Haddii aad ku raaxaysato shaqada si faahfaahsan oo baaraya, shahaado CIA shaqeyn lahaa si fiican kuu. Dhanka kale, CPA ah ayaa sidoo kale shaqada hanti dhawrka samayn karo laakiin waxa uu leeyahay fursado mustaqbalkiisa ciyaareed ka badan ee meelaha canshuurta iyo ka warbixinta, abuuro aqoonsi dheeraad ah oo isu. Haddii aad doorbidayso hanti dhowrka, canshuurta, warbixinta iyo sharciyeynta, ka dibna wadada CPA noqon lahaa adiga kuu wanaagsan. Haddii aad rabto in xulkooda xataa dunida sii dhaqaale, waxaad tagi kartaa labada! Si aad u bilowdo safar CPA, waa in aad bilowdo by cilmi baarista waxa DIB U EEGIDDA KOORSADA waa in aad isticmaasho si ay u bartaan for imtixaanka. Tani waa talaabada ugu horeysa ee weyn! Barbardhig KOORSOOYINKA DIB U EEGIDDA TOP CIA
HELI KOORSADA BEST DIB U EEGIDDA CPA